Uchungechunge lwe-370 Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
Uchungechunge 370 Dragon® Dredge
I-Ellicott Dredges ingomunye wabakhiqizi bama-dredge abahamba phambili e-US nasemhlabeni jikelele. I-Series 370 Dragon® dredge yethu ingenye yebanga losayizi omncane elithandwa kakhulu futhi eliphumelelayo umsiki we-cutter suction embonini. Amakhasimende asukela kubasebenzisi abasha bokuqala abasebenza ezindaweni ezikude zomhlaba, kuya kosonkontileka jikelele, abanikazi abazimele, nezinhlaka zikahulumeni kulo lonke elase-United States.
Le modeli isetshenziswa kakhulu ezinhlelweni eziningi kufaka phakathi ukudonswa kwemifula, ukudonswa echibini, ukunakekelwa kwama-marinas neziteshi zokuzulazula, ukunakekelwa kwemisele, ukuvikelwa kogu nolwandle nokubuyiselwa kwamaxhaphozi namaxhaphozi.
I-370 DREDGE ADVANTAGES
Idizayini elula ikwenza kube yindawo enhle yabanikazi besikhathi sokuqala.
I-cutter suction dredge emangelengele futhi ethembekile inikeza isikhathi sokuphumula esincane ngokunakekelwa kwansuku zonke okubalulekile.
Isistimu yokulawula, injini, nezinto zomshini ezikhethwe ngokusobala ukuthi zisetshenziswe ezindaweni ezinzima zasolwandle.
Okunhlobonhlobo — okusetshenziselwa ukumbiwa kwesihlabathi, ukwembiwa kwemifula emincane yamanzi, imisele nama-marinas.
Usayizi wokukhipha: I-12 ″ x 10 ″ (300 mm x 250 mm)
I-Standard Engine Caterpillar C. 93: I-416 HP (310 kW)
I-Power @ Cutter Drayivu: I-40 HP (30 kW)
Izinhlobo ezintathu ongazikhetha ngokususelwa kubunzulu obukhulu bokudonsisa edingekayo: I-20 ′ (6 m), 33 ′ (10 m), noma i-42'-50 '(12.8 m-15.2 m)
I-pump handling crane
I-Stern jib crane yokukhipha ipayipi
Isifudumezi segumbi le-lever kanye ne-air conditioner
Izintambo ze-Swing winch kanye namahange